Bayazibongela abamele iKZN kuma-Idols SA
INSIZWA yaseRichards Bay uLungisani Mthethwa owaziwa ngelikaMr Music ohlelweni ama-Idols SA, isiveze ukuthi ifisa ukuthi ngabe abazali bayo bayaphila ukuze babone ukuthi yenza kahle kanjani emculweni.
IKwaZulu-Natal ijabule ngokuthi uMr Music noPhumzile Mseleku owaziwa ngelikaNdoni bangene esigabeni esibalulekile salolu hlelo esaziwa ngeTop 5.
Amagama abo abizwe ngokulandelana okusheshe kwenza abalandeli babo bakhululeka uhlelo lusaqala.
“Umama washona ngo-2007, ubaba walandela ngo-2014. Ukuba bakhona ngabe bayaziqhenya ngami, kodwa-ke ugogo ngiyathemba ukungibuka kwakhe ohlelweni ngenza kahle kuyamjabulisa. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngokungibeka la ngikhona, akulula neze kodwa umusa wakhe nabalandeli bami bangifikise esigabeni engangingaziboni ngifinyelela kuso. Ukulalela abantu abasiqondisayo kulolu hlelo kungisizile njengoba ingoma ngizifundisa yona uma nje siqeda kuyithola nokuthi uma sekufika usuku lwangeSonto uvalo lokuthi ngingayibhimba lube lungasekho,” kuchaza yena.
Uthe nezingoma azinikiwe nazikhethile uma ecula, abantu yizona abazomazi ngazo uma eseqhubeka ecula.
“Noma ngingangawina kodwa abantu ngifuna bazi ukuthi uhlobo lomculo engizogxila kulona i-Afro pop. Ngeke besangizwa ngicula ezinye izingoma njengoba ngigcine ngibonile ukuthi lolu hlobo lomculo abalandeli bami yilona abazothanda ngiqhubeke nalo,” kuchaza uMr Music.
UNdoni waseNewlands West, eThekwini, uveze ukuthi yize ekhumbule indodakazi yakhe ayishiya incane kodwa uyaziqhenya ngokuba kulesi sigaba sohlelo.
“Nami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa wakhe futhi ngiyabonga nakubantu abalokhu beqhubekile nokungivotela. Ukulalela ngingasho ukuthi yikhona okungisizile ekufikeni kulesi sigaba sohlelo, nezingoma enginikwe zona ohlelweni zidlale indima enkulu ekufikeni kulesi sigaba,” kuchaza uNdoni.
Ohlelweni lwangeSonto abazocula bazobe behambisana nekhwaya eyathakaselwa abaningi ngesizini edlule, iThe Mzansi Gay Choir.
UNDONI okwi-Top 5 ohlelweni ama-Idols SA
UBONGA uMdali ngokufinyelela esigabeni seTop 5 uMr Music benoNdoni abamele isifundazwe iKwaZulu-Natal ohlelweni